Ny MacBook Pro avo lenta dia tratran'ny iPad Pro vaovao miaraka amin'ny M1 | Avy amin'ny mac aho
Tamin'ny 20 aprily tamina hetsika an-tserasera dia natolotr'i Apple, ankoatry ny zavatra maro, ny iPad Pro vaovao miaraka amin'ny M1. Masinina tena izy izay ankehitriny dia heverina ho safidy mahomby amin'ny Mac. Nefa koa, raha mandinika ny tarehimarika asehony isika dia manana fitaovana iray izay ambony noho ny MacBook Pro misy miaraka amin'i Intel ankehitriny. Bibidia.
Ny benchmark dia mampiseho fa manolotra ny iPad Pro M1 fiakarana haingam-pandeha 50% ary mahomby amin'ny MacBook Pro avo lenta. Ny kaomandy voalohany ho an'ny iPad Pro M1 dia kasaina hahatratra ny mpanjifa amin'ity volana ity. Talohan'ny fahatongavan'ireo tonga ireo dia nahatratra ny Geekbench ny valin'ny benchmark voalohany an'ny takelaka vaovao sy be mpahalala indrindra an'ny Apple, ary ny valiny dia manamafy ny filazan'ny Apple fa ny iPad Pro vaovao dia mahatratra 50% haingana kokoa noho ireo teo alohany.
IPad Pro ny taranaka fahadimy miaraka amin'ny processeur M1 mahazo isa singa tokana manodidina ny 1.700 ary tarehimarika marobe manodidina ny 7.200. Ho fampitahana, ny iPad Pro 2020, ampandehanan'ny mpanera A12Z, dia mahatratra 1.100 sy 4.656 isa amin'ny mari-pahaizana tokana sy multi-core.
Ny fahombiazan'ny iPad Pro M1 dia mitovy amin'ny Macs miaraka amin'ilay puce M1 vaovao, ary tsara lavitra noho ny iPad Pro A12Z soloiny. Izy io aza dia mamono ny MacBook Pro 16-santimetatra ambony indrindra, faharoa raha hisafidy ny fikirakirana iMac sy Mac Pro. Ka safidy tsara ho an'ireo tsy maniry solosaina izany. Ankehitriny, tsy mitsahatra ny milaza aho fa ny olana amin'ny iPad Pro dia ny hoe tsy ny macOS ny rafitra miasa. Ka tsy ho afaka hanao hetsika sasany azontsika atao amin'ny Mac isika. Fa mazava ho azy izay an-tananay dia ny ho avy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple products » iPad » MacBook Pro avo lenta dia tratran'ny iPad Pro vaovao miaraka amin'ny M1
Apple TV + dia tombanana ho efa nihoatra ny 40 tapitrisa ny mpanjifa